GPS 1 afọ 7 ọnwa gara aga #1283
Enwere m ihe ọhụrụ iji rikoooo ma budata ụfọdụ ụgbọ elu. Nsogbu m na-enwe bụ enweghị m ike ị nweta ihe ọkpụkpọ 2D na GPS ogwe. Ọ dị ka enweghị m 2D na PMDG m ejighi n'aka ma ọ bụrụ na enwere onye nrụpụta a. Naanị ihe m na-enweta bụ rektangulu ojii na akụkụ ụfọdụ ogwe dị oke oke. Ghọta enyemaka ụfọdụ. Ajụjụ ọzọ m nwere bụ na m edobere njikwa m na FSUIPC?
GPS 1 afọ 7 ọnwa gara aga #1284
Oge ike page: 0.240 sekọnd